मैले देखेको नर्सिङ
भदौ १७, २०७३ शुक्रवार १७:३४:०० प्रकाशित
फ्लोरेन्स नाइटिङ्गेलले सुरुवात आधुनिक नर्सिङ अहिलेसम्मआइपुग्दा थुप्रै कोल्टे फेरेको छ । हाम्रो जस्तो विकाशोन्मुख मुलुकमा पहिला पहिला गरिब, विधुवा र पिछडिएको वर्ग यो पेशामा संग्लग्नहुने चलन थियो । समयको माग र परिवर्तनसँगै अहिले उच्च वर्गका युवतीहरुको पनि यो पेशाप्रती आकर्षण बढ्दै गएको छ । मध्यमवर्गिय युवतीको त प्रमुख रोजाई नै नर्सिङ बन्न पुगेको छ । रोजगार पनि पाइने र सेवामुखी पेशा भएकाले यसतर्फ आकर्षण बढेको हो ।
आखिर के हो त नर्सिङ ?
यो यस्तो पेशा हो, जसमा केही वर्षको पढाई र सो सँगै तालिम लिएपछि पढाई पुरा हुन्छ । पढाई सकिएपछि नर्सिङ काउन्सिलमा दर्ता परीक्षा दिनुपर्छ । यो परीक्षा पास भएपछि कुनै पनि नर्सले आफ्नो पेशाको सिमाभित्र रहेर स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा वा जनचेतना पु¥याउन सक्छन् ।
हाम्रो समाजले कुनै बेला नर्सलाई “छि” को भावनाले हेर्नेगथ्र्यो । तर अहिले समय परिवर्तन भएको छ । बिहेका लागि नर्स केटी खोज्ने चलन बढ्दै गएको छ । अभिभावाक पनि आफ्नो छोरीलाई नर्स बनाउन चाहन्छन् । यो यसक्षेत्रको ठुलो परिवर्तन हो ।
नर्सिङ विशुद्ध सेवामुखी पेशा हो । त्यसैले पनि नर्सहरु रात दिन नभनी सेवामा खटिएका छन् । उनीहरुले परिवारको प्राथमिकताका लागि सेवा अवरुद्ध गर्न चाहदैनन् । नर्सहरु चाडबाड त पछि पनि आउँछ तर बिरामीको ज्यान अर्को पटक आउदैन भन्ने मान्यता राख्छन् । त्यसैले यो पेशा निकै पवित्र छ र मानिन्छ पनि । म नर्स बनेकोमा अहिले गर्व लाग्छ ।
एउटी नर्सलाई आफुले सेवा गरेको बिरामीको ज्यान जोगाउन वा उसलाई निको पार्दा मिल्ने सन्तुष्टिले उसलाई आनन्द दिलाउछ । सेवाभाव दरिलो बनाउँछ । यहीभावले जुनसुकै परिस्थितीमा पनि उसलाई अस्पतालतर्फ डो¥याउँछ ।
नर्सिङ क्षेत्रमा प्रवेश गर्नेको संख्या बढ्दै गएपछि केही सुधार गर्नुपर्ने विषयहरु पनि देखिएका छन् । तर सेवा अनुसारको मुल्याङ्कन हुन नसक्दा खल्लो अनुभूती हुनेरहेछ । सरकारले पनि थोरै संख्यामा भएपनि उच्च तहसम्म नर्सका लागि दरबन्दी सिर्जना गरेको छ । केही वर्षपछि स्वास्थ्य सचिव पनि नर्सबन्ने अवसर आउनेछ । यो क्षेत्रमा लागेकाहरुले एकअर्काको खुट्टा तान्ने प्रवृती अनि पूर्वाग्रहबाट अलग हुनसके नर्सिङ क्षेत्रको विकास थप मजबुत हुनेथियो । एटटी नर्सलाई समस्यापर्दा अर्की बोल्न डराउने र उसको हकहितका लागि आवाज निकाल्न डराउने प्रवृती बढ्दै गएको छ । यो हाकिमसँगको डर वा उसलाई हटाउन सके आफु त्यो ठाँउमा पुग्न सकिन्छ भन्ने कुण्ठा हुनसक्छ । यो निकै डरलाग्दो अवस्था हो । धेरै नर्स अहिले यस्तै समस्यामा छन् । हामीले आफ्नो स्वार्थ त्यागी थिती बसाल्न सक्यौं भने यो पेशाको जग मजबुत हुनेछ र कसैले पनि अन्याय सहनु पर्ने छैन । अहिले त प्रशासनले दिएको बिदा स्विकृत गर्न पनि आफ्नै क्षेत्रको अर्कि नर्सलाई खुसी बनाउनु पर्ने अवस्था छ ।
अहिले माग भन्दा बढी उत्पादन हुन थालेपछि यो क्षेत्रमा केही विकृती देखिन थालेका हुन् । धेरै नर्सहरु रोजगारबाट बन्चित छन् । हजारौंले निःशुल्क सेवा गर्नु परेको छ । कतिलेत निःशुल्क सेवा गर्न पनि पैसा तिर्नु परेको छ । यो निकै दुखद पक्ष हो ।
आफ्नो अनुरुप नहँुदा केही नर्सले लोकसेवा आयोगको परीक्षामा मुद्धामामिला गरेर धेरै नर्सहरुलाई अवसरबाट बञ्चित गराएका छन् ।
यो सुन्दर पेशालाई मन, वचन र कर्मले दाग लाग्नबाट जोगाउनु पर्छ । वाह नेपाली नर्स भन्ने पार्न सक्नुपर्छ । त्यो हाम्रो हातकै कुरा हो । मैले देखेको नर्सिङ पेशाको भविष्य सुनौलो छ । हातेमालो गरौं र यो पेशालाई अझ सम्मानित बनाऔं ।
(बगाले वी.पी. कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान धरानमा नर्सिङ स्नातकोत्तर तहमा अध्ययनरत छिन् )